Inona no fomba tsara indrindra hahazoana rindranasa toy ny pro proxy?
Misy fomba maro samihafa hahazoana rohy. Saingy alohan'ny zavatra hafa, tokony horaisintsika ho azo antoka - Ny fividianana na fifanakalozana amin'ny rindran-damina dia zavatra mampidi-doza loatra izay mety hanisy ratsy ny tranonkalanareo. Izany no antony mahatonga ny fomba tsara indrindra hahazoana rindran-damina toy ny pro-pro-real dia manao izany amin'ny alàlan'ny tenany ihany. Eny, mety hanjary asa sarotra sy tena sarotra tokoa izany. Na dia izany aza, ny vokatra farany dia tena mendrika ny ezaka rehetra ataonao. Mazava ho azy, rehefa nizotra tsara. Ireto ambany ireto misy drafitra fampiharana marobe ampiasaina izay hampiseho aminao ny fomba tsara indrindra ahafahana miverin-dalana toy ny pro. Noho izany, andao isika hiditra ao anatin'ity tetikady fifandraisana an-teboka telo manaraka ity izay niasa ho ahy ho toy ny mahasarika. Ireto misy izy ireo:
Mitondrà Sarobidy Aminao Amin'ny Votoatin-tranonkalinao
Manana votoaty miavaka izay mety ilaina sy sarobidy ho an'ny olona ny fanalahidin'ny fandresena bakolava kokoa, ary toerana ambony kokoa. Tadidio fa ny votoatin'ny mpanjaka, sa tsy izany? Tsotra ny zava-drehetra - ny votoatin'ny kalitao misy anao ao amin'ny pejinao, ny mpampiasa bebe kokoa dia ho tia azy ary hampifandray anao. Noho ny filazana fa tena ilaina tokoa ny asa soratranao, dia tsy isalasalana fa handray soa avy amin'ny fitohizan'ny rindran-damina tsy tapaka sy voajanahary. Tokony hanana fahasarotana amin'ny fisafidianana ny lohahevitra tsara ianao mba hahatonga ny votoaty tianao indrindra, manoro hevitra aho amin'ny fampiasana ny tranonkala EpicBeat. Tsidiho ny tranonkala ofisialy ary andramo ny fikarohana ny lohahevitra mirongatra indrindra, ny fifanakalozan-dresaka mafana, ary ny mpitarika mivantana. Amin'izany fomba izany, dia ho afaka hanitsy ny lahatsoratra ifarimbonana ianao mba hifanaraka amin'ny tombotsoany be indrindra amin'ny mpihaino anao.
Mianara bebe kokoa amin'ny fanomezana fahafaham-po bebe kokoa
Ny fanoratana fikarohana fikarohana, tranga momba ny tranga, na votoaty hafa mampihoron-koditra dia mety ho fomba tsara indrindra hahazoana rohy. Eny, mety handany fotoana betsaka izany, kanefa izany no mahatonga anao ho mpandray anjara manan-danja hanomezana lanjany be voninahitra ny mpihaino anao. Ataovy izay hahazoana antoka fa ny zava-drehetra izay niasa mafy mba hamoronana dia tena manan-danja tokoa amin'ny orinasanao. Amin'izany fomba izany, mandefa ny fangatahana mailaka na manome ny fikarohana ataonao eo amin'ny pejin'ny tranokalan'ny tranokala na blôginao maintim-be anao dia hanome vintana bebe kokoa ho anao ny famerenana ireo backlinks kalitao ho setrin'izany.
Mandehana amin'ny media sosialy amin'ny votoatiny azo ifampiresahana
Ny fandefasana hetsika goavana ao amin'ny media sosialy dia tsy anisan'ny fomba tsara indrindra hahazoana rohy mankany aoriana ny fahefana lehibe ao amin'ny tranonkala lehibe, mametraka fepetra mitohy, manaraka, ary famandrihana amin'ny fotoana mitovy. Ny ilainao rehetra dia ny mamorona ny mombamomba ny orinasanao manan-karena amin'ny horonantsary na horonan-tsary na horonan-tsary, horonam-peo hafa manintona maso, sary samihafa, tabilao, sns.Raha manao izany ianao, dia hahazo rindran-kiheba bebe kokoa any amin'ny blaoginao na tranokala. Ankoatra izany, raha mifantoka indrindra amin'ny podcasts ianao, dia afaka mahazo haingon-drakitra automatique avy amin'ny tranonkala fampiantranoana ny podcasts ianao. Fenoy fotsiny ny mombamomba anao any ary ampidino ny rohy manondro anao, mba ho raisina ho backlink ilaina Source .